एसईईलाई खारेज गरौं, विद्यालयलाई नै जिम्मा दिऔं :: SoftNEP :: एसईईलाई खारेज गरौं, विद्यालयलाई नै जिम्मा दिऔं
बिहीबार, वैशाख २५, २०७७ SoftNEP
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अन्तिम समयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित भयो । यो वर्ष परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना विद्यार्थी सामेल हुँदै छन् । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि अब परीक्षा कहिले हुने हो, अन्योल छ । शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवाला निकायले एसईई परीक्षाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । विद्यालयको मूल्यांकनलाई नै आधार बनाएर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्यालयको मूल्यांकनलाई आधार मानेर प्रमाणपत्र दिँदा के हुन्छ ? अब एसईई परीक्षाको विकल्प के हुन सक्छ भनेर हामीले शिक्षाविद्हरूसँग कुरा गरेका छौं ।
उहाँहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
एसईईलाई खारेज गरौँ
डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
सुरुदेखि नै एसईई नराखौँ भन्दै आएका हौं । कक्षा ११ र १२ पनि विद्यालय तहमा भएपछि एसईई आवश्यक नै छैन । १० कक्षाको जाँच १० मै रहन दिनुपर्छ । १० कक्षाको जाँच शिक्षकले गर्ने हो । अहिलेलाई कक्षा १० र ११ को जाँच नगर्ने निर्णय सरकारले गरे हुन्छ ।
अहिले अध्यादेश जारी गर्ने पछि समर्थन गराउने । करिब ५ लाख विद्यार्थी एसईई र १४ लाख ११ कक्षामा छन् । उनीहरूका लागि पनि सहज हुन्छ । विद्यालय तहको कक्षा ८ को एउटा परीक्षा लिए राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय बोर्डले लिने अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हुन्छ । कक्षा ८ को स्थानीय डिग्री हुन्छ ।
राणाकालीन मोडेललाई हटाऔँ
डा. सुरेन्द्रराज गिरी, निर्देशक, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र
जंगबहादुर राणकोे समयमा दरबार हाई स्कुल सञ्चालनमा आयो । अहिले पनि हामी दरबार हाई स्कुलको मोडेलमा छौँ । अब यो ढाँचामा जान सकिँदैन । ३ घण्टा जाँच दिएर घोकन्ते शिक्षा राणाकालीन मोडेल हो । अब यो मोडेललाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । मकाले मोडले, टिचर्स सेन्टर मोडेल, पेपर मोडेल अब काम छैन । मूल्यांकनलाई आधार मान्नुपर्छ ।
अहिले कोरोना महामारी छ । यो सही समय हो शिक्षाको मोडेल परिवर्तन गर्ने । अहिले स्वास्थ्य ठूलो हो । भोलि चाडपर्व दसैँ, तिहार, उँधौली उँभौली, ल्होछार, जाडो, गर्मीजस्ता बिदा कटाएर पढाउन सकिन्छ । त्यसैले भोलिका लागि अहिले नयाँ मोडेल बनाऔँ ।
विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिऔँ
टीका पुरी, अध्यक्ष, प्याब्सन
अहिलेको परिस्थितिमा परीक्षा एसईई गर्न सकिँदैन । विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणीकरण गरेर विद्यालयलाई प्रमाणपत्र दिऔँ । यसले शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सहयोग पनि पुग्छ । विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने भनेको विद्यालयले हो । त्यसैले हामीले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छौँ ।
तत्काल हतार नगरौं
सुवास न्यौपाने, महासचिव, एनप्याब्सन
जेठको अन्तिमसम्म पनि एसईई गर्न सकियो भने शैक्षिकसत्र प्रभावित हुँदैन । अहिले वैशाखको अन्तिममा छौँ । त्यसैले अझै हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सेन्टरहरू नजिक बनाएर परीक्षा गर्न सकिन्छ । जेठ अन्तिमसम्म पनि सकिएन भने त्यसपछि विद्यालयको मूल्यांकनलाई आधार मान्न सकिन्छ । तत्काल एसईईको परिवर्तनतर्फ लाग्नु हुँदैन । यहाँ शिक्षामन्त्रीकै पटक–पटक फेरिने बोलीले समस्या भएको छ । कहिले ३ वटा परीक्षा गरेर पूरा गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ । कहिले २६ पछि भर्नाको तयारी गर्नुहोस् किताब वितरण गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ । मन्त्रीज्यूको फेरिइरहने कुराले असहज बनाएको छ ।
विद्यालयलाई नै जिम्मा दिऔँ
केशव पुरी, अध्यक्ष, अभिभावक संघ
सरकारले सामुदायिक होस् या निजी १ कक्षादेखि ९ सम्म विद्यालयलाई विश्वास गर्ने । १० कक्षाको परीक्षालाई किन विश्वास नगर्ने ? १ देखि ९ कक्षासम्मको सर्टिफिकेट मान्ने । अनि विद्यालयले दिएको एसईईको सर्टिफिकेट किन नमान्ने ? अहिलेको परिस्थितिमा यो समयमा विद्यालयलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ ।
अघिल्लो वर्षको रिजल्ट त कन्ट्रोल कार्यालयमा छ । विद्यलायले बदमासी गरे भने त्यसलाई मूल्यांकन गरेर विद्यालयको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । विद्यालयले सही मूल्यांकन गरेन भने सरकारले कारबाही पनि गर्न सक्छ । त्यसैले अहिले एसईईको अधिकार विद्यालयलाई दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ । एसईईलाई हाउगुजी नबनाऔँ । साभार : शिलापत्र डट कम ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २५, २०७७ ०३:२७